Antanifotsy Karohina ireo roalahy nitrobaka sabatra mpivady
Niafara tamin’ny tsindrona zava-maranitra ana mpivady ny fifamaliana teo amin’izy ireo sy ireo mpiambina ny tanàna na ny Zamami.
Raim-pianakaviana sahabo ho 50 taona no maty tsy tra-drano ny 24 oktobra teo sahabo ho tamin’ny 8 ora alina, tao amin’ny fokontany Vohimandroso Atsimoniala, kaominina Ambatomiady, distrika Antanifotsy. Naratra mafy tamin’izany koa ny vadiny izay 20 taona ka efa nentina nihazo ny hopitaly Antanifotsy. Zamami roalahy no nahavanon-doza izay nampitondra faisana ireo mpivady. Voalaza fa nonina teo Betsiboka Ambatomiady ihany ireto nanindrona sabatra saingy tsy eny an-toerana rehefa nokarohin’ny mpitandro filaminana. Zandary efatra avy ao amin’ny paositra Ambatomiady sy ny lehiben’ny borigady niampy mpitandro filaminana telo avy ao amin’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena Antanifotsy no nidina teny ifotony nanatanteraka ny fizahana izay nomban’ny dokotera. Efa misahana tanteraka ny fikarohana ireo olondratsy ny mpitandro filaminana.